Izingobo Ezigciniwe Zenhlangano Yezempilo Yomhlaba - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Isikhungo Sabalingani Bokubambisana Kokudla neMonsanto
ICentre for Food Integrity (CFI), phambilini eyayiyiGrow America Project, iyinhlangano engenzi nzuzo exhaswa yizimboni eyenza imikhankaso yocwaningo, ukunxenxa kanye nobudlelwano bomphakathi ukuze "ithole ukwethembela kwabathengi" kwezinkampani zokudla nezolimo, okubala I-DowDuPont, iMonsanto, iCargill, i-Costco, i-Grocery Manufacturers Association, i-Hershey, i-Kroger kanye nezinhlangano zezohwebo zenyama, ubisi nobhontshisi.
Esikhathini seminyaka emihlanu kusuka 2012-2016, I-CFI isebenzise ama- $ 23,225,098 ekumaketheni nasekuthumeleni imiyalezo ehlukahlukene izinhlelo ukukhuthaza ukuthumela imiyalezo embonini ukwakha ukwethembela ekudleni okwenziwe ngezakhi zofuzo, izibulala-zinambuzane, izithasiselo zokudla nemithi elwa namagciwane enyameni.
Ingalo yeCFI engu-501 (c) (3), ingalo ye- Isisekelo Sobuqotho Bokudla, uxhasa ngezimali ucwaningo lokwazisa imizamo yemiyalezo yokwakha ukwethembela kwabathengi, ngesabelomali sokusetshenziswa esingu- $ 823,167 kusuka 2012-2016. Abaxhasi ngo-2012 yayihlanganisa Inkampani yeMonsanto, iCropLife America kanye ne-US Farmers and Ranchers Alliance.
"Umlingani wezezimboni" ekuhlaselweni kukaMonsanto kuphaneli yomdlavuza we-IARC
Lokhu idokhumenti yangaphakathi yeMonsanto ikhomba i-Centre for Food Integrity “njengomlingani womkhakha” ezinhlelweni zobudlelwano bomphakathi noMonsanto zokudicilela phansi igama lengalo yocwaningo lomdlavuza le-World Health Organisation, i-International Agency for Research on Cancer (IARC), ukuvikela isithunzi seRoundup weedkiller. Ngo-Mashi 2015, i-IARC yahlulela i-glyphosate, isithako esiyinhloko ku-Roundup, ukuthi ibe mhlawumbe i-carcinogenic kubantu.
Uhlelo lweMonsanto lubala izingxenye ezine zabalingani bemboni ukubamba iqhaza emizameni yayo yokuxhumana nomphakathi. I-CFI ibhalwe njengohlu lwe-Tier 3 “partner partner” kanye namanye amaqembu amabili axhaswe izimboni zokudla, i- Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke futhi Inhlangano Yabenzi Begilosa.
Ngokwalo mbhalo, la maqembu ayeyingxenye ye “Stakeholder Engagement team” eyayingaxwayisa izinkampani zokudla “ngecebo lokugomela” likaMonsanto ukuze linikeze imfundo ngamazinga e-glyphosate futhi “lichaze izifundo ezenzelwe isayensi uma kuqhathaniswa ne-ajenda eqhutshwa yi-ajenda” yomdlavuza ozimele iphaneli.
Bheka ukubambisana kwe-East / CMA ne-Monsanto ne-Genetic Literacy Project
Isikhulu esiphezulu seCentre for Food Integrity, uCharlie Arnot, naye uyi-CEO ye Bheka eMpumalanga (phambilini i-CMA), i-PR kanye nezokuxhumana ejensi yezokudla nezolimo. Izinkontileka zeCFI neLook East zezinsizakalo zokuphathwa kwamaphrojekthi, ngokusho kwamafomu entela.
Inkampani ka-Arnot PR nayo isebenza neMonsanto, ngokusho kwemibhalo etholakele ngu-US Ilungelo Lokwazi. Ku-2014, iMonsanto yathinta i-CMA ku- “Thengisa” futhi uphromothe uchungechunge lwezinqubomgomo ze-pro-GMO ezinikezwe umphathi we-Monsanto osolwazi futhi wahlela ukuzishicilela kuwebhusayithi ye-Genetic Literacy Project - ngaphandle kokudalulwa kwendima kaMonsanto ekusithekeni, njenge Kubike iBoston Globe.
The Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, elinye iqembu lozakwethu embonini eliqanjwe ohlelweni lukaMonsanto lwe-PR lokwehlisa isithunzi i-IARC, nalo lithola uxhaso kwiCentre for Food Integrity, ngokusho kwe-GLP yamuva futhi ngokuvamile “ikhasi lokubonisa ngale” elingalungile
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane I-Cargill, Isikhungo Sobuqotho Bokudla, UCharlie Arnot, I-CMA, Costco, CropLife Melika, DowDuPont, Isisekelo Sobuqotho Bokudla, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Inhlangano Yabenzi Begilosa, I-Grow America Project, Hershey, IARC, Umkhandlu Wokwaziswa Kwezokudla Womhlaba Wonke, Kroger, Bheka eMpumalanga, Monsanto, I-US Farmers and Ranchers Alliance, World Health Organization
IMonsanto ithi izibulala-zinambuzane zayo ziphephile. Manje, inkantolo ifuna ukubona ubufakazi
Posted on Mashi 5, 2018 by UStacy Malkan
Imicimbi yaleli sonto izokwakha okokuqala lapho isayensi esetshenzisiwe ukufakazela izibulala-zinambuzane ezithile iyohlaziywa ngaphansi kwesifungo ukuze ibonwe yibo bonke
Lo mbhalo ushicilelwe okokuqala ngo The Guardian.
Ngomsombuluko, ukulalelwa kwenkantolo yenhlangano eSan Francisco sizobeka obala emphakathini isayensi ezungeze ukuphepha kwesinye sezibulala-zinambuzane ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni, ikhemikhali lokubulala ukhula elibizwa nge-glyphosate elixhunyaniswe nomdlavuza futhi elitholakala kakhulu ukudla namanzi, ngisho nakwethu uketshezi lomzimba wakho. Uma sibheka imiphumela ebanzi yezempilo nezemvelo ehlobene nokusetshenziswa kwalesi sibulala-zinambuzane, sizosizakala ukuthi sinake.
Njengesithako esisebenzayo ku-Roundup esinegama likaMonsanto namakhulu eminye imithi yokubulala ukhula, i-glyphosate imele izigidigidi zamaRandi emalini engenayo yaminyaka yonke yeMonsanto nezinye izinkampani, futhi isetshenziswa kakhulu ngabalimi njengosizo lokukhiqiza ukudla. Kuyathandwa futhi ngamadolobha ukugcina amapaki omphakathi nezinkundla zokudlala kungekho ukhula, nangabaninikhaya abafuna utshani obuhle. Kepha lelo khemikhali lathathwa njenge- kungenzeka i-carcinogen yomuntu ngochwepheshe bomdlavuza beWorld Health Organisation ngonyaka we-2015 ekutholeni okuqale kudala amagagasi amacala amacala ngokumelene neMonsanto.
Izinkulumompikiswano ezishubile mayelana nokuphepha - noma ukuntuleka kwawo - kwalesi sibulali zinambuzane esidumile ziye zasabalela umhlaba futhi kwaqubula impi yenkulumo-ze uhlangothi ngalunye luthi olunye luye lwaveza kabi umlando wesayensi. Izisulu zomdlavuza zisola ukuthi iMonsanto inayo Kubhalwe “isipoki” ukubuyekezwa kocwaningo, abalawuli abathonywe ngokungafanele futhi badala amaqembu angaphambili ukuthi afune amanga ngokuphepha kwe-glyphosate. IMonsanto, okwamanje, iqinisekisa izifundo eziningi zososayensi bamazwe inamaphutha futhi inenkuthazo kwezepolitiki, futhi ithi izifundo zemboni zibonisa ukuthi umkhiqizo uphephile uma usetshenziswa njengoba kuhlosiwe.
Imicimbi yaleli sonto kuzobe kungokokuqala ngqa lapho uhlaka lwenhlangano yocwaningo, eminye ebilokhu iqoqa uthuli kumajenali agcwele isayensi noma kumafayili ezinkampani eziyimfihlo, luzohlaziywa ngaphansi kwesifungo ukuze lubonwe ngabantu bonke.
Akuwona umsebenzi wokungenzi lutho. Izimpilo zangempela zisengozini kulokhu futhi kunezimpikiswano ezibanzi mayelana nobungozi bezibulala-zinambuzane empilweni yethu. Oyedwa kwabesilisa ababili nowodwa kwabesifazane abathathu manje kulindeleke ukuthi bahlakulele umdlavuza esikhathini sabo sokuphila futhi Umdlavuza wezingane uyanda.
Ezinganeni, ukuvezwa kwezibulala-zinambuzane akuxhunywanga nje kuphela umdlavuza wezingane, kepha futhi nokwehla kokusebenza kwengqondo, nezinkinga zokuziphatha. Kubantu abadala, izibulala-zinambuzane zixhumene i-non-Hodgkin's lymphoma, i-leukemia, ubuchopho, i-prostate namanye amagciwane. Abamangali abangaphezu kuka-3,000 XNUMX abamangalela iMonsanto bethi ukuvezwa kwenkampani esekwe eglyphosate-based Roundup kubangele bona noma amalungu emindeni yabo ukuthi benze i-non-Hodgkin's lymphoma.
IMonsanto izamile ukuncenga ijaji laseMelika uVince Chhabria ukuthi alilahle leli cala, futhi yafuna ukugcina imfihlo imibhalo eminingi yangaphakathi ephoqeleke ukuthi iphendulwe lapho itholwa. Kepha uChabria ukhiphe umyalelo wokuthi ukulalelwa kube kuqoshwe ividiyo futhi kwabiwa esidlangalaleni nge-inthanethi. Futhi uye wakwenza unikezwe imvume ukuze abamangali bahlole enkantolo evulekile izinto ezinjengokubhalwa kwesipoki kwesayensi kanye no isifundo esiyimpikiswano sango-1983 ukuthi ososayensi be-EPA ngaleso sikhathi bathi bakhombisa ubufakazi bokuthi i-glyphosate ingadala umdlavuza.
Inkantolo ibize le micimbi ka-5-9 Mashi ngokuthi "isonto lesayensi" ngoba ubufakazi obuzokwethulwa kuphela buzovela ochwepheshe besayensi yomdlavuza, kuhlanganise izazi ze-epidemiologists, i-toxicologists nabanye kubizwe ukuhlaziya ucwaningo olufanele. Ngeke zibe khona izisulu zomdlavuza ezikhalayo zokudonsa izintambo zenhliziyo; izinhlangothi eziphikisayo ezethula isayensi kwijaji elizonquma ukuthi amacala angaqhubekela phambili yini.
Ukuqinisa ukuzivikela kwayo, inkampani nababambisene nayo embonini yamakhemikhali bebelokhu sisebenzela ukwehlisa isithunzi ososayensi bomdlavuza nabanye abakade bexwayisa ngengozi. Lowo mzamo ugqanyisiwe lapho amalungu ekomidi leNdlu lezesayensi, isikhala nobuchwepheshe wabamba indlebe eWashington ngomhla ka-6 kuNhlolanja ukuyofaka izikhalazo zikaMonsanto mayelana nokuhlukaniswa kwe-glyphosate njenge-carcinogen okungenzeka kube yi-carbinogen, kanye nokusabisa ngokuhlwitha imali ohlangothini lwesayense.
Umzamo wekomidi - ngokuguqula impi yomdlavuza waba yimpi yesayensi yomdlavuza - kwaba njalo kushayelwe ihlombe imboni yamakhemikhali. IMonsanto, kanye ne-lobbyist CropLife America nezinye izinhlangano zezolimo, nayo wamangalela iCalifornia ukumisa abalawuli bezemvelo ukuthi bangadingi izexwayiso zomdlavuza ngemikhiqizo ye-glyphosate, futhi ngomhla ka-26 kuNhlolanja bona uwine umyalo ukuvimba isexwayiso esinjalo.
Impikiswano nge-glyphosate kodwa iyisibonelo sakamuva sendlela imizamo yezimboni ejwayele ukugxila ngayo ekuhloleni ubufakazi besayensi bokulimala, kepha ekudicileleni phansi isayensi ekhubekisayo. Ngonyaka odlule, ngokwesibonelo, iDow Chemical yacela ngempumelelo ubuholi be-Environmental Protection Agency ukuthi ungazinaki izixwayiso ezivela kososayensi bayo (nabanye) ngocwaningo olunzulu olubopha umuthi wokubulala izinambuzane onenzuzo obizwa nge-chlorpyrifos ezinkingeni zokukhula kobuchopho ezinganeni.
Ukunikezwa esidlangalaleni kobufakazi bochwepheshe eSan Francisco mayelana nesibulali zinambuzane esigcwele iMonsanto kunikeza ithuba elibalulekile lokuhlukanisa isayensi ne-spin. Sonke kufanele ngabe sibhekile.
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane UCarey Gillam, CropLife Melika, IDow Chemical, glyphosate, Guardian, IARC, Monsanto, World Health Organization